Germany's No. 2 Izicwangciso stock exchange ukulungiselela ukuqaliswa kwe-Crypto Trading App - Blockchain News
UTshazimpuzi 13, 2018 admin
Jamani No. 2 Izicwangciso stock exchange ukulungiselela ukuqaliswa kwe-Crypto Trading App
Ingalo fintech of yesibini ngobukhulu istock exchange Germany imiselwe ukuze uqalise i app cryptocurrency urhwebo kamva kulo nyaka.
Le app ziya kufumaneka ngo-Septemba kwaye ekuqaleni ukunika ukurhweba inkxaso ye Bitcoin, Litecoin and cryptocurrencies ngaphezulu.
le app, ebizwa Bison, iya kuba ukhululekile ukuba thwebula kwaye, ngokuvumelana developers yayo, akayi imali zorhwebo ngelixa kusungulwa. A umatshini le app ezikhutshwayo demoed ngexesha lomboniso kurhwebo Stuttgart kule veki.
app nyathi mobile app yokuqala crypto yorhwebo kunye exhaswa stock exchange zemveli ngayo.
Paxos inkampani crypto ...
Post Previous:CEO Salesforce yazisa izicwangciso lwemveliso blockchain
Post Next:Coinbase ujoyina Earn.com
UTshazimpuzi 18, 2018 e 6:15 PM
UCanzibe 3, 2018 e 2:04 AM
i thought about this uthi:
UCanzibe 4, 2018 e 9:48 AM
Isilimela 19, 2018 e 11:53 PM
Isilimela 24, 2018 e 9:23 AM
Isilimela 24, 2018 e 10:35 AM
Isilimela 24, 2018 e 11:03 AM
Isilimela 24, 2018 e 8:00 PM
EyeKhala 2, 2018 e 2:01 AM
EyeThupha 9, 2018 e 4:16 PM